Xaalada abaarta ka jirta gudaha Puntland oo meel adag maraysa iyadoo dadku ay u baahanyihiin gurmad bini’aadanimo oo deg deg ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXaalada abaarta ka jirta gudaha Puntland oo meel adag maraysa iyadoo dadku ay u baahanyihiin gurmad bini’aadanimo oo deg deg ah
March 8, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Dadka ay abaartu saamaysay ayaa si deg deg ah ugu baahan biyo iyo cuno. [Xigashada Sawirka: Puntlandi]
Garoowe-(Puntlan Mirror) Xaalada abaarta ka jirta gudaha gobolada Puntland ayaa maraysa meel aad u adag, iyadoo dadku ay u baahanyihiin gurmad deg deg ah.
Dad badan oo xoolihii ay dhaqan jireen ka dhammaadeen ayaa hadda bilaabay in ay u guuraan magaalooyinka si ay naftooda u badbaadiyaan.
Abaarta hadda jirta ayaa lagu qiyaasay in ay saamaysay 1.5 milyan oo dad ah oo ku dhaqan gudaha Puntland.
Dadka ay abaartu saamaysay ayaa si deg deg ah ugu baahan biyo iyo cuno. Waxaana ay dadkaasi khatar ugu jiraan in ay naftooda waayaan haddii aan si dhaqso ah gurmad loola gaarin.
Dhawaan hal qof ayaa haraad dartiis ugu geeriyooday deegaan miyi ah oo ku dhow tuulada Godob-jiiraan ee gobolka Nugaal.
Gurmadka abaarta ayaa u muuqda mid gaabis ah iyadoo marba marka ka dambaysa ay xaalada dadkaasii sii xumaanayso.
Abaarta hadda taagan ayaa gabi ahaanba si guud u saamaysay Soomaaliya oo dhan.
Nolosha dadka xoolo dhaqatada ah ayaa ku tiirsan xoolaha nool iyadoo xooluhuna ay ku tiirsanyihiin xilli roobaadka ka da’a dalka, xilli roobaadkii Deyrta oo sida caadiga ah la helo bilaha October iyo November oo baaqatay ayaa sababtay abaar daran ee hadda gaaracaysa dhulka. Xilli roobaadka soo socda ayaa ah Gu’ waxaana la filayaa in uu da’o bilaha April iyo May.
November 25, 2016 Abaartii ugu xumayd muddo sannado ah oo Puntland ka jirta, iyadoo 1.5 milyan oo qof ay u baahanyihiin cuno iyo biyo
December 15, 2016 Madaxweynaha Puntland oo codsaday caawimaad caalami ah oo wax looga qabto abaarta daran
Body of unknown man found floating in Burtinle well
Garowe-(Puntland Mirror) The dead body of unknown man was found on Tuesday morning in water well in Burtinle district of Nugal region, according to the residents and police officials. The body was discovered in the [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta oo Isniin ah u safray dalka Cumaan. Madaxweynaha ayaa dalkaas u tagi doona sidii uu tacsi ula wadaagi lahaa geeridii ku timid Suldaankii Cumaan [...]